Wasiiro ka socda Dowlada Somalia oo baladweyne garay – idalenews.com
Wafdi balaaran oo uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhiga xukuumadda soomaaliya mudane Cabdi xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa maanta gaaray magaalada b/weeyne ee xarunt gobolka hiiraan.
Wasiirka oo ay wehliyeem qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya,safiirka dalka jabuuti u fadhiya soomaaliya,gudoomiyah maamulka gobolka hiiraan Cabdi Faarax Sharaawe (Laqanyo),fanaaniin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa markii ay gaareen garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada b/weeyne waxaa si aad ah u soo dhaweeyay dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka hiiraan oo ku diyaarsanaa garoonka.
Wasiirka gaashaandhiga ayaa markii uu gaaray magaalada b/weeyne waxa uu warbaahinta u sheegay in safarkiisa uu ku wajahanyahay in uu kormeero islamarkaana uu dhiiri galiyo ciidamada xooga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan,isagoo sheegay in dhawaan maleeshiyaadka Al-shabaab laga xureeyn doono deeganada fara ku tiriska ah ee gobolka hiiraan oo ay gacanta ku hayaan.
Wasiirka ayaa u mahadceliyay ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Jabuuti,isagoo sheegay ciidamadasi uu kala qeyb gali doono munaasabadda xurnimada dalka jabuuti oo ku beegan 27kan bishan June.
Safiirka dalka jabuuti u fadhiya soomaaliya Dayib Dubad Rooble ayaa sheegay in shacabka soomaaliyeed ay kala qeyb gali doonaan munaasabadaha 26ka June iyo 1da Luuliyo,isagoo sheegay n ciidamada Jabuuti ee ku sugan magaalada b/weeyne ay la wadaagi doonaan farxadda maalinta xuriyada ee dalka Jabuuti.
Wafdi uu hogaaminayay wasiirka gaashaandhiga Cabdi xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa magaalada b/weeyne kulamo kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada.
Wasiirka ayaa shacabka ku dhaqan magaalada b/weeyne uga mahadceliyay sida wanaagsan oo ay ugu soo dhaweeyeen magaaladaasi,isagoo tilmaamay in shacabka ku dhaqan gobolka hiiraan ay taageersanyihiin dowlada soomaaliya.